ဒီထက် ကောင်းအောင် လုပ်ပေး မယ် – Hlataw.com
ဒီထက် ကောင်းအောင် လုပ်ပေး မယ်
အဲဒီနေ့ကကျမချောင်းကြည့်တာကို ကောင်လေးရိပ်မိသွားတယ် ထင်တယ်… သူကလဲရေချိုးခန်းတံခါးကို မပိတ်တာအကြံနဲ့ ထင်ပါရဲ့.. ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ထောင်မတ်နေတဲ့ သူ့ဟာကြီးးကိုမြင်လိုက်ရပြီး.. သူ့မျက်နှာလဲမကြည့်ရဲတော့တာနဲ့အိမ်ကိုပြန်လိုက်တယ် အိမ်ရောက်တော့လဲ အဲဒီကောင်လေးဂွင်းထုနေတာကိုဘဲမြင်ယောင်နေပြီး. .ကျမအဖုတ်ထဲကအရည်တွေကလဲစိမ့်ထွက်နေတာနောက်ဆုံးမထိန်းနိုင်တော့တာနဲ့ မီးဖိုခန်းထဲဝင်ပြီး…
သူများတွေပြောသံကြားဘူးတဲ့အတိုင်း ခရမ်းသီးတစ်လုံးကိုရေဆေးပြီးအိပ်ခန်းထဲယူလာပြီး ကျမအဖုတ်ကွဲကြောင်းလေးအတိုင်းပွတ်လိုက်အစိလေးကိုထိုးလိုက်လုပ်နေပါတော့တယ်.. .အိုအရမ်းကောင်းလိုက်တာပါလား..ကောင်လေးရဲ့ဟာကြီးနဲ့သာဆိုရင်လို့တွေးရင်း အဖုတ်ထဲကိုထိုးသွင်းလိုက်ဆွဲထုတ်လိုက်လုပ်နေမိပါတော့တယ်… အိုး…ကောင်းလွန်းလို့ကျမပါးစပ်က တစ်ဟင်းဟင်း…..နဲ့ညည်းညူနေမိပါတယ်… ခရမ်းသီးနဲ့လုပ်ကြည့်တာအရမ်းကိုကောင်းလွန်းလှပါတယ်ရှင်… ဟိုကောင်လေးရဲ့လိင်တံကြီးနဲ့သာ အဖုတ်ထဲထိုးသွင်းလိုက်ရရင်..ကျမစဉ်းစားရင်းအရမ်းကိုခံချင်စိတ်တွေဖြစ်နေပါပြီ….
.ပက်လက်လှန်ပြီးလုပ်ရတာအားမရတာနဲ့ကုတင်အောက်ကိုဆင်း. ကုတင်ပေါ်ကိုခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုတင်လိုက်ပြီး ရှုပ်လွန်းလှတဲ့ထမိန်ကိုပါကွင်းလုံးချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ဘယ်လက်ကအဖုတ်ကိုဖြဲပြီးကျမရဲ့အစိရှည်ရှည်ကြီးကိုကလိရင်းညာလက်နဲက ခရမ်းသီးကြီးကိုကိုင်ပြီးအဖုတ်ထဲကိုပယ်ပယ်နယ်နယ်ထိုးဆွနေလိုက်ပါတော့တယ်.. ခရမ်းသီးကြီးကိုစွပ်ကနဲထိုိးထည့်လိုက်ပြွတ်ကနဲအသံထွက်အောင်ဆွဲထုတ်လိုက် အားကနဲကြိတ်ပြီးအော်လိုက်နဲ့လုပ်ကောင်းကောင်းစိတ်ရှိလက်ရှိကိုလုပ်နေလိုက်တာ. တဏှာစိတ်တွေများလွန်းတော့တံခါးကိုတောင်ဂျက်ချဖို့ကုိုတောင်မေ့သွားလို့ ကျမတို့မိသားစုဆရာဝန်ဦးမောင်မောင်ဇော်နောက်ဖက်ကိုရောက်နေတာမသိလိုက်မိတော့ပါဘူး…
“သမီး..ဒါထက်ပိုကောင်းအောင်ဦးဇော်လုပ်ပေးမယ် ”ပြောပြောဆိုနဲ့ဦးဇော်ကကျမကိုဆွဲလှည့်ပြီးကုတင်ပေါ်ကိုပက်လက်လှန်လှဲလိုက်ပါတယ်… ကျမဟာအဖုတ်ထဲမှာခရမ်းသီးကြီးတန်းလန်းနဲ့ရှက်စိတ်ကြောက်စိတ်နဲ့ ကြက်သေသေဖြစ်နေတုန်းဦးဇော်ဟာ သူ့လုံချည်ကိုချွတ်ချလိုက်ပြီးအတွင်းခံဘောင်းဘီကိုပါချွတ်လိုက်ပါတော့တယ်…. ဦးဇော်ရဲ့လိင်တံကြီးဟာမြွေဟောက်ကြီးတစ်ကောင်လိုငေါက်ကနဲထိုးထောင်ပြီးထွက်လာပါတော့တယ်… အလိုလေး…နဲနဲနောနောလိင်တံကြီးလားရှင်….
အရှည်ကြီးဘဲ…တုတ်ခိုင်ပြီးသန်မာလိုက်တာကလဲထောင်မတ်နေတာဘဲ… အသားဖြူပြီးထိပ်ဖူးကြီးကလဲ။ဖူးတင်းပြီးကားထွက်နေတာဘဲ… ဦးဇော်ဟာကျမအဖုတ်ထဲကခရမ်းသီးကြီးကို ကျမအဖုတ်ထဲကိုဆောင့်ဆောင့်သွင်းလိုက်နြှဲ့လိုက်ဆောင့်လိုက်လုပ်ပေးရင်း သူလိင်တံကြီးကိုကိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်… ကျမလဲမရဲတစ်ရဲနဲ့ဦးဇော်ရဲ့လိင်ချောင်းကြီးကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်မိပါတော့တယ်…“ အိုး..ဦးဇော်ဟာကြီးက..မာတောင်နေတာဘဲ..လက်နဲ့တောင်မဆန့်ဘူး…” “သမီး…ဟိုဟာဒီဟာအဲလိုမျိုးမခေါ်နဲ့လေ..သူ့နံမယ်အတိုင်းဘဲခေါ်တာပိုပြီးအရသာကောင်းတယ်…
ဘာမှရှက်စရာ.ကြောက်စရာ..အားနာစရာမရှိဘူးနော်… လိုချင်တာပြော..လုပ်ချင်တာကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီး..လုပ်ကြတာပိုကောင်းတယ်” “ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဇော်. .ဦးဇော်ရဲ့ ဟို…လီးကြီးကအရမ်းကိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာ…ခရမ်းသီးနဲ့ဆောင့်လိုးပေးတာလဲသိပ်ကောင်းတာဘဲ..” “ဦးဇော်ရဲ့လီးကြီးနဲ့အလိုးခံလိုက်ရင်ပိုကောင်းသွားမှာ.. .”“အမလေး…ဦးဇော်ရဲ့လီးကဒါလောက်ကြီးပြီးရှည်တာသမီးစောက်ဖုတ်ကွဲထွက်သွားမှာပေါ့…
သမီးဦးဇော်လီးကြီးကိုကြောက်တယ်… အလိုးမခံရဲဘူး….ဦးဇော်ကိုသမီးလက်နဲ့လုပ်ပေးမယ်လာ..” ကျမဟာဦးဇော်ရဲ့လီးကြီးကိုကိုင်ပေးနေရာကဆိုင်ကေ ဂ်ါရခါးလေးဂွင်းတိုက်နေတာကိုသွားသတီရလိုက်ပြီး. .ဦးဇော်ကိုအဲဒီလိုမျိုးအားရပါးရဂွင်းထုပေးချင်စိတ်ဖြစ်လာပါတော့တယ် ကျမဟာကုတင်ပေါ်ကဆင်းလိုက်ပြီး…ဦးဇော်ရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ် ..ဦးဇော်ရဲ့လီးကြီးဟာကျမမျက်နှာကုိုပွတ်တိုက်မိသွားတယ်…
အမလေးမာတောင်နေတဲ့လီးနဲ့မျက်နှာကိုထိုးမိတာတောင်တော်တော်ကောင်းနေပါလား.. .စောက်ဖုတ်ထဲအလိုးခံကြည့်ရရင်ကောင်းမယ်..ဘာဖြစ်ဖြစ်အလိုးခံကြည့်တာကောင်းမယ်.. ..ခုတော့ဂွင်းထုပေးလိုက်အုံးမယ်..ပြီးမှဘဲလိုးခိုင်းတော့မယ်.. သူလဲကျမကိုလိုးချင်နေမှန်းကျမသိနေတယ်လေ…. ကျမဟာရင်တွေတစ်ဒိုင်းဒိုင်းခုန်နေပြီးအာခေါင်တွေလဲခြောက်နေပါပြီ….ဒူးတွေလဲတုန်နေပါပြီ… ကျမဟာတုန်ရီနေတဲ့ဘယ်လက်နဲ့ဦးဇော်ရဲ့ပေါင်ကိုကိုင်ပြီး ညာလက်နဲ့ဦးဇော်ရဲ့လီးကြီးကိုိဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်..
အိုးလီးကြီးကကျမလက်ညိုးလက်မမထိမိအောင်ကြီးလိုက်တာ.. သန်မာပြီးတုတ်ခိုင်လိုက်တဲ့လီးကြီးပါလား..ကိုင်ရတာလဲအားရလိုက်တာ.. ကျမဟာဦးဇော်ရဲ့လီးကြီးကိုညှစ်လိုက်ပြီး.ဂွင်းစထုပေးနေပါပြီ…. ထိပ်ဖူးကြီးကနေလီးအရင်းထိဖြေးဖြေးချင်းဆွဲချလိုက်အပေါ်ကိုပြန်ဆွဲလိုက်နဲ့ မှန်မှန်လေးတိုက်ပေးနေရင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရှိန်မြန်လာပြီးအသံတွေထွက်တဲ့အထိအားရပါးရကြီးကိုထုပေးနေမိပါတယ်.. ဦးဇော်ဟာလဲကျမထုပေးနေတာကောင်းလွန်းလို့ ကော့ကော့ပေးရင်းတစ်ဟင်းဟင်းညည်းညူနေပါတော့တယ်..
အိုးယောက်ကျားတစ်ယောက်ဟာကိုယ်ဂွင်းထုပေးတာကို အရသာတွေ့နေတာကိုကြည့်ရတာကိုကအသဲထဲကကျေနပ်နေမိပါတယ် ကျမဟာဦးဇော်ရဲ့လီးထိပ်ကြီးကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ကိုင်ပြီးပွတ်ပေးလိုက်… ညှစ်ဆွဲလိုက်လီးရင်းကိုညှစ်ပြီးဝိုင်းလိုက်နယ်လိုက်လုပ်ချင်သလိုလုပ်ပေးနေတော့ ဦးဇော်လဲမခံနိုင်အောင်ဖြစ်လာပြီး “အား..အား..ကောင်းလိုက်တာသမီးရယ်…ပြီးချင်သလိုတောင်ဖြစ်နေပြီ… ခဏလေး..သမီး.ခဏလေးပါ”ီဦးဇော်ဟာကျမကိုခဏရပ်ခိုင်းလိုက်ပြီးကျမအကီင်္ျကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ်… အတွင်းခံဘော်လီကိုချွတ်ဖို့ဂျိတ်ကိုကုန်းဖြုတ်လိုက်တော့ သူ.လီးကြီးဟာကျမပါးစပ်နှတ်ခမ်းတွေကိုပွတ်ဆွဲသွားပြီးပါးစပ်ကိုလီးနဲ့ထိုးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်. အမလေး..အသဲတွေယားသွားတာပါဘဲရှင်…
ဒါပေမဲ့နှတ်ခမ်းတွေကိုလီးနဲ့ထိလိုက်ရတာလဲအရသာတစ်မျိုးကောင်းသလိုပါဘဲလား သူ့လီးကြီးကိုစုတ်လိုက်ချင်စိတ်တောင်ဖြစ်လာပြီ….အိုး ဦးဇော်ရဲ့လီးမွှေးတွေကလဲမျက်နှာကိုပွတ်ပေးနေသလိုပါဘဲလား ဦးဇော်ကျမရဲ့အတွင်းခံဘော်လီကိုဆွဲချွတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ ကျမဟာကိုယ်တုံးလုံးကျွတ်နဲ့ယောက်ကျားတစ်ယောက်ရဲ့တောင်မတ်ပြီးသန်မာလှတဲ့ လီးကြီးကိုမျက်နှာရှေ့မှာထားပြီးဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေရတဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်ကိုတွေးမိပြီးရယ်ချင်လာပါတော့တယ်.. ဦးဇော်ဟာကျမကိုပခုံးနှစ်ဖက်ကိုကိုင်ပြီးမတ်တတ်ဆွဲထလိုက်ပါတယ်..
…ပြီးတော့ကျမနှတ်ခမ်းတွေကိုသူ့နှတ်ခမ်းကြီးနဲ့စုပ်ရင်းကျမရဲ့နို့သီးတွေကိုဆုပ်နယ်ပေးနေတော့တယ်.. အို..အင်း..အင်း…ကျမဟာကောင်းလွန်းလို့အသံထွက်အောင်ညည်းညူမိနေပါတော့တယ်.. .လက်တွေကျမရဲ့ဖင်သားတွေကိုပွတ်ရင်းဖင်ဝကိုလာထိလိုက် ဖင်ဝလေးကိုပွတတ်လိုက်လုပ်ပေးနေတာကောင်းလိုက်တာ… ကျမလဲဖင်လေးကိုကော့ကော့ပေးနေမိတော့တယ် ..လက်ကဖင်ဝကိုနှိက်ပြီးလီးကြီးကလဲကျမရဲ့စောက်စိရှည်ကြီးကိုညှောင့်လိုက် စောက်ဖုတ်အက်ကြောင်းအတိုင်းထိုးထည့်ပြီးစောက်ခေါင်းအ၀ကိုဒစ်နဲကမွှေလိုက်လုပ်နေတော့ ကျမစိတ်တွေဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ..“ဦးဇော်..ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ..သမီးမနေတတ်တော့ဘူး..လုပ်ပါတော့. ..လိုး..လိုးပေးပါတော့..မရတော့ဘူးအရမ်းခံချင်နေပြီ..အလိုးခံချင်နေပြီ. .လိုး..လိုးပါတော့ဦးဇော်ရယ်….သမီးကိုသနားပါအုံးအလိုးမခံရရင်သေတော့မယ် …မနေနိုင်တော့လို့ပါ”..အရှက်မရှိလိုးခိုင်းမိပါတော့တယ်….
ဒီတော့မှဦးဇော်ဟာကျမကိုကုတင်ဇောင်းပေါ်ကိုပွေ့တင်လိုက်ပြီး. ..ကျမပေါင်နှစ်ချောင်းကိုမိုးပေါ်ထောင်ပြီးဖြဲကားခိုင်းလိုက်ပါတယ်.. .ကျမလဲသူ့စိတ်တိုင်းကျပေါင်ကိုမိုးပေါ်ထောင်လိုက်ပြီးကားပေးလိုက်ပါတယ်…. ကျမစောက်ဖုတ်ဟာဦးဇော်လိုးဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျမအလိုးခံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ… လိုးတော့ဦးဇော်..လိုးလိုက်ပါတော့… သမီးဦးဇော်လိုးတာခံချင်နေပြီ… ဦးဇော်ဟာသူ့လီးကြီးကိုအရင်းကကိုင်ပြီးကျမစောက်ဖုတ်ကိုလက်တစ်ဖက်ကဖြဲလိုက်ပြီး အသာတေ့ပြီးဖိသွင်းလိုက်ပါတော့တယ်.. “အား..အမလေး..နာတယ်ဦးဇော်..နာလိုက်တာ…ဖြေးဖြေး..အား… ဦးဇော်ရဲ့လီးကြီးဟာကျမစောက်ဖုတ်ထဲကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်နဲ့တစ်ဝက်လောက်ဝင်သွားတော့တယ်… အား..ကောင်းတယ်ဦးဇော်..နဲနဲနာတယ်…ဖြည်းဖြည်းဘဲလိုးပါနော်….ဖြည်း..ဖြည်း…အား.အား ဦးဇော်တစ်ချက်လိုးလိုက်တိုင်းတစ်ချက်အားကနဲအော်နေမိပါတော့တယ်….
ဦးဇော်ဟာသူ့လီးကြီးကိုအဖျားထိဆွဲနှတ်လိုက်အရင်ထက်နဲနဲပိုလိုးသွင်းလိုက်လုပ်ရင်း လီးတစ်ချောင်းလုံးဝင်အောင်လိုးပါတော့တယ်.. လီးတစ်ချောင်းလုံးသွင်းထုတ်ပြီးအလိုးခံနေတော့ ကျမဟာနာတာထက်ကောင်းတာကိုပိုခံစားလာရပါတော့တယ်.. ကိုယ့်ဟာကိုယ်လဲအားရလာပြီး.. .ကောင်းတယ်ဦးဇော်…လီးတစ်ချောင်းလုံးမြုပ်အောင်သွင်းပြီးဆောင့်လိုးတော့ သမီးခံလို့အရမ်းကောင်းနေပြီး…အိုး..အား…ကောင်း..ကောင်း..လိုက်တာဆောင့်ပါဦးဇော်ရဲ့ ဆောင့်လိုက်စမ်းပါ…အမလေး…ခံလို့ကောင်းလိုက်တာ…အင့်..အင့်. .ဦးဇော်ဟာကျမကိုအသားကုန်ဆောင့်ပြီးလိုးပါတော့တယ်…အင့်အင့်ဖတ်..ဖတ်..ဖေါင်းဖေါင်း.. .အခန်းတစ်ခန်းလုံးကျမရဲ့အော်ဟစ်သံ…ဆောင့်လိုးသံတွေဟာဖုံးလွှမ်းနေပါတော့တယ်..
ကျမအလိုးခံလို့ကောင်းနေတုန်း..ဦးဇော်ဟာလီးကြီးကိုဇတ်ကနဲဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်…. ဘာ..ဘာလုပ်တာလဲဦးဇော်.. သမီးအလိုးခံလို့သိပ်ကောင်းနေတဲ့ဟာကိုဘာလို့လီးကြီးကိုနှတ်လိုက်ရတာလဲ.. မရဘူး..ပြန်သွင်းပေး…ပြန်လိုး..အစကပြန်လိုးပေး…. သမီးကိုဒါထက်ခံကောင်းအောင်လို့ပုံစံပြောင်းလိုးမလို့ပါ.. ..ဟင်း…မကောင်းရင်တော့ နောက်ဘယ်တော့မှမလိုးရတော့ဘူးမှတ်… ဦးဇော်ဟာဘာမှမပြောဘဲကုတင်ဇောင်းပေါ်တက်မတ်တတ်ရပ်လိုက်တယ်.
..အို…သွေးတွေပါလား…ဦးဇော်ရဲ့လီးကြီးမှာသွေးတွေရွှဲနေလို့ပါလား.. ကျမကိုအသားကုန်လိုးထားလို့ကျမရဲ့စောက်ပတ်ကသွေးတွေထွက်ပြီး.. သူ့လီးကြီးမှာပေကုန်တာကို….အော်…စောက်ဖုတ်ထဲကသွေးထွက်ကိုအောင်လိုးတဲ့ဦးဇော်ရယ်… ဦးဇော်ဟာကျမခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုမိုးပေါ်ဆွဲထောင်လိုက်ပြီး ဒကောက်ကွေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီး မဲနက်သန်စွမ်းတဲ့စောက်မွှေးတွေကြားကပြူးထွက်ပြဲလန်ဖေါင်းကားနေတဲ့ ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးပေါ်ကကိုထိုင်ချပြီးကျမစောက်ခေါင်းထဲကိုသူ့ လီးကြီးကိုတေ့ပြီးလီးအရင်းထိထိုးသွင်းလိုက်ပါတော့တယ်
အား… သမီး..နာလားဟင်… မနာဘူးဦးဇော်…အသဲခိုက်သွားလို့ပါ… ဦးဇော်လီးကြီးကသမီးအဖုတ်ထဲတစ်ချောင်လုံးပြည့်ကျပ်နေတာကိုသိပ်ကြိုက်တာဘဲ… အရမ်းကောင်းလိုက်တာဟုတ်လားဒါဖြင့်ဦးဇော်အသားကုန်ဆောင့်ပြီးလိုးတော့မယ်နော်.. အင်း……စိတ်ကြိုက်သာဆောင့်လိုးပါတော့..မနေနိုင်တော့ဘူး… သမီးအရမ်းကိုအလိုးခံချင်နေပြီ… လိုး..လိုး..ပါတော့…ဦီးဇော်ရဲ့.. ဦးဇော်ဟာအဆုံးထိဆွဲနှတ်လိုက်…… အရင်းထိလိုးသွင်းလိုက်နဲ့အသာချော့ပြီးအကြိမ်နှစ်ဆယ်လောက်လိုးလိုိက်ပြီး….
တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ခပ်ကြမ်းကြမ်းလိုးရင်းနောက်ဆုံးတော့ကျမကိုအသားကုန်ဆောင့်လိုးပါတော့တယ် တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ခပ်ကြမ်းကြမ်းလိုးရင်းနောက်ဆုံးတော့ ကျမကိုအသားကုန်ဆောင့်လိုးပါတော့တယ်ကျမလဲအောက်ကနေပင့်ပေး. .ကော့ပေးလုပ်နေရာကအရမ်းကိုအရသာတွေ့နေပါတော့တယ်… အ.အ.အား..အင့်အင့်..ကောင်းတယ်ဦးဇော်.လိုး..လိုး.ဆောင့်သာလိုးပေး ..အမလေး…ကောင်းလှချည့်လား…ကျမဟာကာမအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်နေပါပြီ… .ဦးဇော်သမီးပြီးတော့မယ်…အို…အ..အ..ကပ်..ကပ်ထားလိုက်.. ဦးဇော်လီးကြီးကိုတစ်ဆုံးထိုးထည့်ပြီးကပ်ထားလိုက်တော့..အီး….အား…… .ပြီးပြီ…သမီးပြီးသွားပြီး….ကျမဟာကာမအရသာအပြည် ဦးဇော်ဟာအဆုံးထိဆွဲနှတ်လိုက်……အရင်းထိလိုးသွင်းလိုက်နဲ့ အသာချော့ပြီးအကြိမ်နှစ်ဆယ်လောက်လိုး လိုိက်ပြီး….တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ခပ်ကြမ်းကြမ်းလိုးရင်းနောက်ဆုံးတော့ ကျမကိုအသားကုန်ဆောင့်လိုးပါတော့တယ် ကျမဟာကျမရဲ့စောက်စိရှည်ကြီးကိုလက်နဲ့ပွတ်လိုက်ဆွဲလိုက် လုပ်ရင်းဦးဇော်လိုးတာကိုခံလို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနေတော့အလိုးခံရတာပိုကောင်းနေပါတယ်….
အ.အ.အား..အင့်အင့်..ကောင်းတယ်ဦးဇော်.ကောင်းလိုက်တာလိုး.. လိုး.ဆောင့်သာလိုးပေး..အမလေး…ကောင်လှချည့်လား… ကျမဟာကာမအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်နေပါပြီ… .ဦးဇော်သမီးပြီးတော့မယ်…အို…အ..အ..ကပ်..ကပ်ထားလိုက်..ဦးဇော်လီးကြီးကိုတစ်ဆုံးထိုးထည့်ပြီးကပ်ထားလိုက်တော့.. အီး….အား…….ပြီးပြီ…သမီးပြီးသွားပြီး… .ကျမဟာကာမအရသာကိုအပြည့်အ၀ခံစားလိုက်ရပြီး ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်အတွင်းသားတွေနဲ့ ဦးဇော်ရဲ့လီးကြီးကိုအသားကုန်ညှစ်ထားလိုက်မိပါတော့တယ်… ဦးဇော်လဲအရမ်းလိုးကောင်းနေရာကပြီးချင်လာပြီး..ကောင်းလိုက်တာသမီးရယ်.. သမီးအဖုတ်ကကျပ်တစ်ပြီးဆွဲညှစ်ထားတော့ဦးဇော်မခံနိုင်တော့ဘူး…ြ ပီးတော့မယ်..အားအား..ထွက်တော့မယ်..အပြင်ထုတ်ပြီးလိုက်မယ်နော်. ကျမက.အိုးးအပြင်မထုတ်လိုက်နဲ့သမီးစောက်ခေါင်းထဲမှာဘဲပြီးလိုက်..လိုချင်တယ်. .ဦးဇော်ရဲ့လရည်တွေကိုလိုချင်တယ် ပြီး
လမ်း ထိပ် က ဗျူးတီး စလွန်